Ambongadiny kely sy mora entina mampiasa isan'andro famonoana otrikaina sy famonoana bakteria Mpamatsy sy mpanamboatra | tsara kokoa
Ny kely sy azo entina isan'andro dia mampiasa famonoana otrikaina sy famonoana bakteria
Ny famonoana otrikaretina dia mety hamono 99,9% ny bakteria. Ny masirasira dite maitso voajanahary dia misy fiantraikany manokana amin'ny fanemorana ny fahanterana. Tsy mankarary tanana na hoditra. Fonosana kely, mora entina.
* Parameteran'ny vokatra
Anaran'ny vokatra: 75% mamafa ny alikaola
Model Model: QMSJ-304
Fitaovana: tsy tenona
Akora ilaina: famono otrikaretina, Nov-tenona, Ro-rano
Akora tsy miasa: Rano, Aloe Vera, Hanitra Citrus
Habe: 14 * 18cm
Lanja (Gramme / metatra toradroa): 40gsm
Sasa isaky ny kapoaka: 750 isa
Fampiasana manokana: Antibacterial, fanadiovana otrikaretina sy fanadiovana.
MOQ: Kapoaka 1000
Fanamarinana: CE, FDA, EPA, MSDS
Fiainana talantalana: 2 taona
Antsipirian'ny fonosana： Kapoaka / baoritra 8
OEM & ODM: MANAIKY
Fe-potoana fandoavana: L / C、D / A、D / P、T / T、Western Union
Seranan-tsambo: Shanghai, Ningbo
Ny famafana antiseptika dia afaka manadio bakteria haingana etỳ ambonin'ny tany ary mety amin'ny fanadiovana ara-pahasalamana. Ny famafana ny bakteria dia tsy vitan'ny ranon-drongony mamono otrikaretina izay mety hahafaty 99,9% ny bakteria, ao anatin'izany ny Escherichia coli, Salmonella, rotavirus ary 90% ny Allergen. Ary nampiditra dite maitso voajanahary koa izahay. Ny otrikaina voajanahary amin'ny dite maitso dia misy fiatraikany manokana amin'ny fanoherana ny fahanterana, fanoherana ny homamiadana, fanoherana ny homamiadana, fanamorana ary ny fanoherana ny inflammatoire. Ary ny dite maitso dia manampy amin'ny fanemorana ny fahanterana. Noho izany dia tsy mila miahiahy ianao sao hanimba ny hoditrao ny otrikaretina. Ity dia soloina mamono otrikaretina izay tsy manimba ny hoditra. Tsy misy loto sy hanitra dite maitso maivana.
Ny famafazana famonoana otrikaretina dia azo ampiasaina amin'ny faritra sarotra sy tsy misy poria, ao anatin'izany ny kojakoja zazakely, fanaka, vata fampangatsiahana, fantsom-baravarana, famaohana, tantanana am-baravarana, lakozia sy efitrano fidiovana, fanadiovana ny gorodona, ny velaran'ny fifandraisan'ny ankizy ary ny vokatra elektronika izay azo ampiasaina isan'andro
Namboarina tamin'ny teknolojia paosy nohatsaraina, afaka mihidy hamandoana bebe kokoa noho ny teo aloha izy io, noho izany dia afaka mando mando maharitra kokoa ny tavy. Tsy misy afa-tsy takelaka 10 isaky ny fonosana, izay mora entina sy avoaka amin'ny fotoana rehetra.
* ORINASA ISIKA
Manana ny orinasa misy anay any Hangzhou, Zhejiang, Sina izahay. Ny vokatra fanadiovana tsara kokoa dia manome ny fianakaviana tantaram-piarovana mihoatra ny 80 taona, izay afaka manampy ny fianakaviana hanohitra bakteria ary hiaro azy ireo amin'ny fahazaran-tena madio. Ny orinasanay dia manohana ny serivisy OEM & ODM ihany koa. Anisan'ireo orinasam-barotra isan-karazany, izahay no safidinao tsara indrindra ary mpiara-miasa matoky tanteraka.
* Toro lalana hampiasaina
1. Esory ny sarimihetsika miaro ary esory ny famafana lena.
2. Azafady asio tombo-kase aorian'ny fampiasana azy tsirairay avy, ary ario miaraka amin'ny lafy fonony mba tsy ho maina.
3. Sasao ny tampon-tany mba hadio, avy eo atsipy ao anaty fitoeram-pako ireo famafana.
Fonosana azo ovaina azo antoka - Ataovy azo antoka fa azo averina ampiasaina ny fonosana eo anelanelan'ny fampiasana mba hisorohana ny famafana ny tampon'ny tany.
Ny fanesorana lena dia tsy eo noho eo, fa tsy atsipazo mivantana any amin'ny trano fidiovana izany.
* Fampahalalana hafa
Aza miditra amin'ny ankizy. Raha atelina tsy nahy: Raha mahatsapa tsy salama ianao dia manatona tobim-panafody na dokotera.
Raha misy tsy mahazo aina mandritra ny fampiasana dia miangavy anao ajanony ny fampiasana azy ary mitady torohevitra ara-pitsaboana haingana.
Teo aloha: Factory OEM 80 hamafa kitapo fanadiovan-tsakafo isan-karazany 75% hamafa toaka
Manaraka: 70% zava-mahadomelina alikaola miaro zava-pisotro misy alikaola misy alikaola azo amboarina
Antiseptika Wipe Wet
Antoka fanosotra miaro amin'ny bakteria azo antoka
mandeha antiseptika hamafa
Madio manadio palitao mamafa mamafa amin'ny avo ...
Factory ambongadiny tsirony voasarimakirana desinfection pers ...